Ogaden News Agency (ONA) – Safiirka Wayaanaha oo Wajigabax kala kulmay shir ay ku qabteen magaalada Houston
Safiirka Wayaanaha oo Wajigabax kala kulmay shir ay ku qabteen magaalada Houston
Gabdha muslimiin ah oo xijaabkoodii ququrxda badnaa ku labisan ayaa ka yaabiyay Wayaanaha iyo qofkasta oo ka soo qaybgalay shirkii Houston lagu qabtay maalintii Axdda ahayd. Sidaa waxaa yidhi saxaafadda oo ka warbixnayay wixii meeshaa ka dhacay. Haweenka Itobiya oo dhaqan ahaan looga bartay dabacsanaan iyo soo dhaweyn ayaa miiska ku rogay Safiirka Wayaanaha u jooga dalka Mareykanka oo filayay soo dhaweyn iyo in lacag badan looga ururiyo shirkaa mashruuca la fahmay hadda ujeedadiisa ee Biya-xidheenka.
Shirka Houston oo la soo buuxiya si kaduwan shirarkii horee ay safaaradda qaban jirtay, ayuu safiirka ka filayay muslimiinta shirka ka soo qaybgalay inay sidii waayadii hore xulufo ula yihiin Tigeega, hasa ahaatee wuxuu kala kulmay dumarkii yimid shirka waxyaabo aanu ka filaynin. Wuxuu la kulmay Haween ku soo talagalay inay si dhab ah uga horyimaadaan ajendaha ay wataan Wayaanaha.
Waxaa shirka ku gadaanaa Nabadsugid xoogan oo loogu talagalay inay cabudhiyaan mucaaradka hadday yimaadaan goobta, hasa ahaatee haweenkii goobta shirka soo galay ayaa diiday in la aamusiiyo oo afka furtay. Waxaa meesha ka soo baxay in mucaaradka dhabta ah ee Itobiya hadda wixii ka dambeeya uuna ahayn rag ku labisan jaakado oy noqdeen Haweenka Itobiya oo Xijaaban. Haweenkaa oo soo buux-dhaafiyay goobta shirka ayaa la soo baxay boodhadh ay ku qoran yihiin diidmadooda iyo qodobo kale.
Shirkan oo bila ka hor lasii diyaarinayay oo dacaayad loo sii sameeyay ayuu Safiirka Wayaanaha Girma Biru ka soo qaybgalay isagoo filayay in lacag malaayiin ah looga guro mashruuca dadka lagu dhaco ee Biya-xidheenka. Sidii dhaqanka u ahayd wuxuu safiirka ka hadlay biya-xidheenka iyo sida xukuumadda Wayaanaha ay ugu guulaysatay inay faqriga kaga saarto Itobiya, taasoo ah dacaayad raqiis ah oo lacag badan lagu bixiyay in la suuq geeyo.
Ka dib waxaa goobtii ka bilowday inay haweenkii muslimiinta ahaa ee xijaabnaa ay qabsadeen oy bilaabeen inay ka hadlaan dhibaatada lagu hayo dadka muslimiinta ah ee Itobiya iyo shacabkii ay kaga soo tageen dalka. Waxaa la’isku dayay in la aamusiiyo hasa ahaatee wuxuu isku badalay shirkii goob qaylo iyo muran uu ka socda. Safiirka oo isku dayay inuu dajiyo ayaa codsaday in wixii su’aal qaba ay soo gudbiyaan, oo kooxdii maamulaysay shirka ay yidhaahdeen iyadoo qoraal ah soo gudbiya, taasoo ay diideen haweenkii si aanay ugu noqonin wax lagu maxkamadeeyo markay tagaan dalka. Markuu safiirka bilaabay inuu si dibloomaasiya iyo meermeerin ah uga jawaabo su’aalihii la weydiiyay ayuu shirkii isku badalay buuq iyo fawda, waxayna bilaabeen dadkii ka soo qaybgalay inay ku heesaan “Woyane Leba” iyo Lelaba Genzeb Ansetim”.
Dibadda ayaa waxaa ka bilowday banaanbax iyo in lagu ceebeeyo safiirka iyo Wayaanihii la socday oo goobta ka baxsaday iyagoo ceeb iyo wajigabax aanay filaynin kala kulmay.
Dadka waxay muuinayeen in waxay diidan yihiin aanay ahayn Biya-xadheen la dhiso oo kharash xoogan dadweynaha looga urursado oo kali ahe ay tahay dhibaatada lagu hayo shacabka Itobiya oo xukuumadda Wayaanaha ay ku tumanayaan xuquuqudii aadamiga ee shacabka Itobiya. Iyadoo booliska ay dadka ku tooganayaa wadooyinka oo qofkii laga dareemo inuu ka soo horjeedo xukuumadda aan dib dambe loo arkaynin oo lagu dhex dilayo xabsiyada, arimahaasoo ay si aad ah uga hadeen haya’adaha xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch, iyo QM, iyo WAD ee Mareykanka iyo kooxda u dooda Saxafiyiinta ee Committee to Protect Journalists (CPJ).
Gabi ahaanba waxaa lagu tilmaami karaa inuu wai cusub galay mucaaradka Itobiya oy ku soo kordheen xoog weyn oo ah haweenka Muslimiinta.